Ijaji laseScotland lilahla umceli mngeni weeklabhu zasebusuku kwipasipoti ye-COVID-19
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseScotland eziQhekezayo » Ijaji laseScotland lilahla umceli mngeni weeklabhu zasebusuku kwipasipoti ye-COVID-19
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Culinary • inkcubeko • ukonwatyiswa • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • umculo • iindaba • abantu • Iindaba zaseScotland eziQhekezayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Ngaphantsi kwesi sikimu, iindawo ezithile zaseScotland, kubandakanya iiklabhu zasebusuku, iminyhadala engafakwanga ngaphakathi yabantu abangaphezulu kwama-500, bema amatyeli angaphandle anabantu abangaphezulu kwama-4,000 kunye nawo nawuphi na umsitho onabantu abangaphezulu kwama-10,000 18 bemihlali, kufuneka bajonge ukuba wonke umntu ongaphezulu kweminyaka eli-19 ugonyelwe i-COVID -XNUMX.
Umbutho woShishino lwexesha lasebusuku, iScotland imangalela ukuvimba inkqubo yokundwendwela entsha ye-COVID-19.
Ijaji laseScotland ligweba ngokuchasene nabakhalazi, lisithi urhulumente angaliphumeza ngokwamkelekileyo eli cebo.
Umbutho weeNight Time Industries, eScotland waligxeka eli nyathelo ngelithi "licalucalula" kwiindawo ezithile.
I-Sottish jaji, u-Lord David Burns, namhlanje uyalile umceli mngeni wezomthetho kwi-COVID-19 yenkqubo yokundwendwela yase-Scotland, ehlasela ityala elilethwe Umbutho woShishino lwexesha lasebusuku, eScotland eyayifuna ukuthintela ukuba umlinganiso ungasebenzi.
Kwisigwebo sakhe, u-Lord David Burns wagweba ngokuchasene nezicelo zabakhalazi zokuba le nkqubo "ayilingani, ayinangqondo okanye ayinangqondo" okanye inyhasha amalungelo abantu.
Ngokwesigwebo sejaji, esi sikimu siwela phantsi kwento urhulumente angayenza ngendlela eyamkelekileyo njengempendulo kulo bhubhane kwaye "yayililinge lokulungisa imiba esemthethweni echongwe ngendlela efanelekileyo".
Ijaji ikwathi le nkqubo izakujongisiswa ngurhulumente nabaphathiswa, abanomsebenzi osemthethweni wokususa imigaqo engasafunekiyo ukukhusela impilo yoluntu.
I-Queen's Counsell (QC) u-Lord Richard Keen, igqwetha elimele Umbutho woShishino lwexesha lasebusuku, eScotland, waligxeka eli nyathelo “njengolucalu-calulayo” kwiindawo ezithile kwiNkundla yeSession, wathi “amalungelo asemthethweni asemthethweni” abo bafaka izicelo kufuneka bakhuselwe.
Ethetha ngurhulumente waseScotland, u-QC uJames Mure ubeke ukuba esi sikimu sasiyilelwe xa iNkonzo yezeMpilo yeSizwe (i-NHS) yayicinezeleke kakhulu ngenxa yalo bhubhane. NgokukaMure, le nkqubo ifuna ukugcina iindawo ezivulekileyo ezibeka umngcipheko wokuhambisa kwaye zikhuthaze abantu ukuba beze ngaphambili bazogonywa.
Ngaphantsi kwesikimu, ngokuqinisekileyo eScotlandIindawo, kubandakanya iiklabhu zasebusuku, iminyhadala yangaphakathi engahambelwanga enabantu abangaphezu kwama-500, iminyhadala yokuma ngaphandle enabantu abangaphezu kwama-4,000 kunye nawo nawuphi na umsitho onabantu abangaphezulu kwama-10,000 18 bemihlali, kufuneka bajonge ukuba wonke umntu ongaphezulu kweminyaka eli-19 ugonyelwe i-COVID-XNUMX.
Urhulumente waseScotland uthe unike amashishini achaphazelekayo iiveki ezimbini ukusuka ekuphunyezweni kwesi sikimu, ekufuneka siqale ngolwe-Sihlanu, ukuba "kuvavanye, kulungelelaniswe kwaye kwakhiwe ukuzithemba kumalungiselelo asebenzayo" afunekayo ngaphambi kokuba unyanzeliswe nge-18 ka-Okthobha.
Ngokwezibalo zikarhulumente wase-UK, ama-92% amaScots afumene isitofu sokugonya sokuqala se-coronavirus, ngelixa ngaphezulu kwe-84% iphindwe kabini.